बजार संवाद : कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ लागिसकेका छौं | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बजार संवाद : कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ लागिसकेका छौं
on: २ माघ २०७५, बुधबार १४:०१ अन्तरवार्ता, बजार
बजार संवाद : कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ लागिसकेका छौं
भीष्मराज चालिसे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स
समस्याग्रस्त कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सलाई सिटी एक्सप्रेस ग्रूपले किनेको १ वर्ष नाघिसक्यो । तर, नयाँ व्यवस्थापनले यसको पुनः सञ्चालन भने गत साउन १ गतेदेखि मात्र थाल्यो । यस अवधिमा कम्पनीले उल्लेख्य सुधार हासिल गरिसकेको छ । करीब १ दशक मर्चेन्ट बैंकमा कामको अनुभव सँगालेका भीष्मराज चालिसे अहिले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी १३ वर्ष एस डेभलपमेन्ट बैंक र डेढ वर्ष काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकमा आबद्ध थिए । उनले सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सको नेतृत्व लिएको १ वर्ष मात्रै पुगेको छ । प्रस्तुत छ, कम्पनीको प्रगतिका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका सुप्रिम तिवारीले चालिसेसँग गरेको कुराकानीको सारः
समस्याग्रस्त कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स भएपछि कस्तो भइरहेको छ ?
कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त रहेको घोषणा गरेको थियो । मृत रूपमा रहेको कुबेर मर्चेन्टलाई सिटी एक्सप्रेस ग्रूपले २०७४ मंसिर २४ गते किनेको थियो । केन्द्रीय कार्यालय परिवर्तन गरेर करीब शून्यबाट शुरू गरेको यस कम्पनीलाई ६ महीनापछि अर्थात् २०७५ साउनदेखि नयाँ टीमले सञ्चालन गर्न थालेको हो । पहिलो ३ महीना खासै राम्रो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सकेनौं । तर, असोज मसान्तपछि भने हामीले निकै प्रगति गर्न सकेका छौं । यतिले मात्र पुग्दैन, अबको वर्ष झन् बढी नाफा कमाउनेछौं ।
वित्तीय अवस्था सुधार्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस कम्पनी मुख्यतया संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छ । धेरै शेयरधनी संस्थापक शेयरप्रति आकर्षित भएका छन् । यस कम्पनीमा एनआरएनले चासो दिएका छन् र केही यस कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको रूपमा भित्रिएका छन् । एउटा विदेशी बैंकले यस कम्पनीमा रणनीतिक साझेदारको रूपमा लगानी गर्ने भएको छ । यसबारे अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । त्यो हामी चाँडै सार्वजनिक गर्छौं । डुबेका कर्जालाई उठाउने र कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई सुदृढ गर्नतर्फ लागिसकेका छौं ।
पूँजी बढाउन रणनीतिक साझेदारीबाहेक अरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पूँजी वृद्धि गरेर रू. ८० करोड पुर्‍याउने र सो पूँजीलाई परिचालन गर्ने योजना रहेको छ । शाखा बढाउने योजना छ । कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स रू. १५ करोडको संस्था थियो । सिटी एक्सप्रेसले किनिसकेपछि रू. २५ करोडबराबरको हकप्रद शेयर जारी गर्‍यौं । पुराना सम्पर्कमा नआएका शेयरधनीले नकिनेको हकप्रद शेयरलाई लीलामीमा राखेका छौं । त्यो प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि हाम्रो रू. ४० करोड चुक्तापूँजी पुग्छ । यसपछि कम्पनीले त्यो पूँजीको १ बराबर १ कित्ता शेयरको हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । त्यसपश्चात् हाम्रो चुक्तापूँजी रू. ८० करोड पुग्नेछ । असार मसान्तमा शतप्रतिशत रहेको एनपीएल असोज मसान्तमा ५४ प्रतिशतमा झारेका छौं । पुस मसान्तको विवरण आउँदा त्यो २५ प्रतिशतमा झर्छ र त्यसलाई अझ घटाएर चैत मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशतमा ल्याउनेछौं ।
कर्जा र लगानीमा कस्तो रणनीति लिनुभएको छ ?
‘ग’ वर्गले गर्न पाउने निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी नै गरिरहेका छौं । अहिले हामीले रू. १० लाखदेखि ३० लाखसम्मको कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गरिरहेका छौं । हाम्रा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू घरजग्गा, सवारी कर्जा तथा साना व्यवसाय हुन् ।
गत असोजपछि हालसम्म भएका अन्य प्रमुख उपलब्धि के के छन् ?
चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार यस कम्पनी खुद नाफा रू. १ करोड ९ लाख ऋणात्मक थियो । तर दोस्रो त्रैमासमा कम्पनी त्यसलाई पूरै ‘कभर’ गरेर रू. ८९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो भनेको ३ महीनाभित्र ८ हजार २ सय ७ प्रतिशत नाफा वृद्धि हो । साथै, कम्पनीले सो अवधिमा रू. २ करोडबराबर निक्षेप बढाएको छ । सञ्चालन नाफा रू. ८९ लाख पुगेको छ । रू. ५ करोड ३५ लाख रहेको खराब कर्जा घटेर रू. २ करोड ३६ लाखमा सीमित भएको छ । रू. ७ करोड रहेको नन बैंकिङ एसेस्ट्स मध्येबाट रू. १ करोड २६ लाख सेटल गरेका छौं । रू. ७ करोड बराबरको नयाँ कर्जा जारी गरेका छौं ।
सिटी एक्सप्रेसको तेस्रो महीनाका विजेता घोषित
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०५:५९